RAVELOSON CONSTANT : RAHA TE HANDAMINA NY CES DIA AVOAHY NY MARINA – MyDago.com aime Madagascar
RAVELOSON CONSTANT : RAHA TE HANDAMINA NY CES DIA AVOAHY NY MARINA
Rehefa miteny hoe taomy ny olona hoy ny Ct Raveloson Constant androany teny amin’ny Magro Behoririka dia izao no dikany : Ataovy mazava amin’ny olona tsara ny antony hanohizana ny tolona sy ny hahatongavana eto. Ny hafatra apetrak’i Mahajanga ho antsika hoy izy dia izao, tsy mila anao akory ny olona na hahafaty azy aza dia mihetsika izy. Fa maninona no mahafaty tena amin’ny mahazo naoty ambany ny oniversité hoy ny fanontaniana napetrany. Tsy Mahajanga irery no nasehon’ny vahoaka hetsika fa na ny zandary aza sahiny. Ampatsiahiviko hoy Constant ny zavatra tratrarintsika. Raharahan’ny Ces na hanao Ces ampilamina na hanakorontana eto. Izao hoy izy ny fanakorontanana ataon’ny Ces sy zandary. Tsy avela ho savaina sy hojerena ny bileta fosika rehetra. Raha te handamina ianao dia avoahy ny marina. Rehefa tsy mety misava dia ianao no mpanakorontana. Ampitahao hoy izy ny PV ary avoahy iaraha mahita. Ity hoy izy izay manana radiom-panjakana ka hoe rehefa tsy manaiky hitsahana any an-tampon-dohany dia lazaina fa mpanakorontana. Avoahy hita-poko ny isaky ny biraom-pifidianana. Ankoatra izay dia nambarany fa tsy misy olona adala eto fa ny olona salama saina dia tsy manaiky atao Mahajanga mandritra ny dimy taona. Tsy misy vahoaka salama saina hifidy taha izany ka hametraka Rajoelina ho praiminisitra. Valio hoy Constant ny fanapempoana mahazo antsika ary aoka hahay hamaly izany amin’ny vahoaka rehetra. Matoa hoy izy Roland Ratsiraka nilatsaka ho filohampirenena dia mba nahita kely ihany fa tsy metyintsony ny fitondran-dRajoelina, kanefa izy amin’izao no milahatra ho amin’ny mpitondra. Ny marina ihany anefa no tompon’ny farany eto.
4 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : RAHA TE HANDAMINA NY CES DIA AVOAHY NY MARINA »
Io indray ianao Ra-Constant, mamporisika vahoaka dia tsy maintsy ianao foana no voalohany mitsoaka sy miafina, kery sahy fa bevava foana fotsiny. Raha vao manomboka mipoaka eo indray ny lacrymogène dia ianao foana no mitsoaka voalohany sy miafina tsy hita andro maromaro rehefa avy eo.
14 janvier 2014 à 20 h 06 min
Iza ndray ty fahamasinana miaro mafy ny halatra sy lainga ity?????? fa angaha izy ry anona soratsoratana foana @ zao an!!!!!!!!!!!
15 janvier 2014 à 4 h 42 min
Denise io eee;ra tsy Denise ve anao loham-poza otran’io;miova anarana fona fa vakian fotsiny kouuouo;hihihihihihihihihihihih
Raha vao misy ny hetsika atao_tsika noho ny tsy fanajana ny safidim_bahoaka.Ka mitifitra ny EMMOREG/EMMONAT.Hitatsika ny misy ny tranony sy ny vady aman_janany ary ny sekoly misy azy
Précédent Article précédent : NY MAHAMAIKA ANAY DIA NY FAMPODIANA AN’I DADA ETO
Suivant Article suivant : Une révélation des Karana